Fitetezana Ny Tontolombolongana Libiana: Rock Frantsay Ao Tripoli Ary Ny Ambasady Amerikana Ao Anatin’ny Trano Iray Fisotroana Kafe · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Septambra 2018 3:00 GMT
Tena tsy tapaka mihitsy ireo fifandraisana Frantsay-Libiana, indrindra indrindra fa resaka kolontsaina sy fanabeazana, na dia nandritra ireo taona “mafy” nisian'ireo sazy aza. Ny Ivontoerana Ara-kolontsaina Frantsay, na dia tsy misehoseho aza, ao afovoan-tanànan'i Tripoli, dia manohy ny asany foana miainga avy amin'io fototra io, manolotra fampianarana teny sy trano famakiamboky hatramin'izay ela indrindra nahatsiarovako saina.
Vao haingana i A. Adam, mpanoratra ny blaogy Flying Birds, no nanatrika fetiben'ny mozika nokarakarain'ny Ivontoerana Ara-kolontsaina Frantsay, izay natao tao amin'ny trano tena raitra fianarana zavakanto Silamo.
Tamin'ity taona ity, nasainy ny tarika Bikini Machine (electro-rock) ary noporofoin'io tarika io fa mbola misy hatrany ny rock frantsay. Mampahatsiahy ny mozika soul an'ireo taona 60 ny mozikan'izy ireo sy an'ny pop anglisy an'ireo taona 90 saingy mialoha ny zavatra rehetra, tsy nohadinoin'izy ireo ny nanasa an'ireo tarika libiana mba hilalao ny mozika arabo”.
Manaporofo io fa maro ny zavatra izay mampivondrona ny olona fa tsy izay manasaraka azy ireo. Manontany tena aho hoe iza no hotehafantsika amin'ny manaraka?
Manoratra eo amin'ny blaoginy i Khadijateri fa ampiasain'ny ambasady amerikana ao Tripoli ny coffee shop ao amin'ny hotely ipetrahany mba hanaovana tafatafa miaraka amin'ireo olom-pirenena libiana teraka tao Etazonia, izay mangataka pasipaoro amerikana.
Tsy mahazo miditra ao amin'ireo faritry ny ambasady ao amin'ny rihana voalohany izy ireo, toho-tsofina ao anatin'ny coffee shop Corinthia no amenoana izay fombafomba ilaina. Ireo metisy libiana-amerikana ireo ny ankamaroany dia ireo tovolahy izay tsy te ho sahirana amin'ny fanaovana tantara satria mihevitra izy ireo fa raha manohitra, dia hihena ny vintana amin'ny hahazoany pasipaoro (izay azon'izy ireo angatahana ara-dalàna tsara mihitsy).
Mampitamberina indray ny olana mankarary mikasika ny fangatahana fahazoandalàna hivoaka io, izay ao Tonisy foana no atao.
Raha hinoana ny vohikalan'ny ambasady, ny 31 may 2006, no nifanakalo vaovao diplomatika i Etazonian'i Amerika sy ny Jamahiriya libiana mba hanamafisana fa ny birao fifandraisan'i USA ao Tripoli dia natao ho ambasady. Midika izany izany fa ambasady manan-jo feno io amin'izao fotoana izao. Faranako amin'ny fieritreretana fa, ny fanontaniana an'ireo olom-pirenena amerikana ao amin'ny coffee shop no hevitra tsara indrindra noho ny hoe ao anatin'ireo biraon'ny ambasady, izay tsy isalasalana fa mbola tsy hananan-dry zareo zo akory momba ny tsiambaratelo .
Olana roa no misy: tsy sahy hangataka ny hikajiana ny tsiambaratelony ireo kandidà ary mihevitra izy ireo fa tsy ho tafiditra ao anatin'ny ambasady. Ho ahy manokana, tsy mbola nitsidika an'io toerana mihitsy aho nefa tsy eritreretiko ho manana sain-dratsy kotrehina ry zareo amerikana. Efa marika tsara ny fahitana an'ireo tanora Libiana mandray fanapahan-kevitra mba hahazo ny taratasiny ary maka hevitra mihitsy aza ry zareo any amin'ilay vehivavy blaogera Khadijateri mba hanontany torohevitra aminy momba ny fomba fifandraisana amin'ireo mpiasan'ny ambasady.